Muranka Badda iyo baraha internetka waxa lagu qoray |
Muranka Badda iyo baraha internetka waxa lagu qoray
Gaalka Dil, Gartiisana Sii: Madaxda Soomaaliyeed Eed maku leeyihiin?
Intaa aanan macluumaadkan soo bandhigain, waxaan idinku goobaabinaayaa in aaynu iska jirno dabo wareenka iyo is baa’binta aan mabda ku dhisnayn. Anigu sababo aan mark soo bandhigi doon, oo ku salaysan karti daro iyo musuq oo ah arimaha aan ku diidanahay sida ay madaxda Soomaaliyeed u maaraynayaa arimaha dib u soo noolaynta wadanka, hadana waxaan leeyahay gar maha in aan kutidhi kuteen ku salayno siyaasadeena.
Marka hore, waxaan aad u soo dhaweynayaa in umadda Soomaaliyeed, yar iyo weyn, ay u foogigan yihiin arimaha wadankooda. Su’aasha aad moodo in ay si balaadhan ugu fiday Soomaalida, gaar ahaan berta wararka la isgugu gudbiyo waa eedayn ah Sheeikh Shariif iyo CCC ayaa bada gatay. XSH se maxuu dhacwad xiligan ugu soo oogay Kenya?
Kadib markaan akhriyey tiemline ama xili-taariikheed ku aadan arimaha badda Soomaaliyee, gaar ahaan cilmi baadhis uu nimaanu saaxiibnahay ii soo diray, waxaan ogaaday in inaka iyo Kenya is-afgranshawaaga badda uu soo taxnaa illa iyo xiligii Talyaniga iyo Ingriisku wadamada Geeska Africa qaybsadeen. Talyaaniga iyo Ingiriisku wey isku dayeen in ay ka wada hadlaan, mase ka heeshiin. Gorgortanka baddeenu waxa uu bilaabmay 1924.
Markaynu xorownay arintani labada dhinacba wey soo rogaal celisay. Is afgaranshwaaga badda ku aadani1960hii ayuu xoogaysta. Sidaas darteed, 1967, Soomaaliya waxay dhaqan gelisay Xeer No. 37 oo ku aadanaa xadaynta Soomaalia. 1977 gudi uu General maxamuud Geele Yusuf hogaan kayahay, Ambasador Cabdullahi Saciid Cusmanka qar yaqaan ka yahay ayaa wakiil uga noqday taakulaynta arimaha xadaynta baddeena.
Iyada oo wada xaajoodka Soomaliya iyo Kenya marna aanu istaagin, wax 2009, March 10 Kenya yimid R/W/kuxigeen C/Raxman Ibi halkaa uu wada xaajood la galay Norwey oo markaa dano dhaqaale ka lahayd baddaha Soomaliya iyo tan Kenyaba. Morway waxay talo keentay in la xadeeyo badda Soomaaliya iyo Kenya. Ibi arintii waxa uu horkeenay Barlamaanka Soomaliya, iyaka oo ansixiyey March 12 in Norway iyo Kenyaba la lashaqeeyo.
April 7, 2009 C/raxman Cabdishakur oo wakiil ka ha CCC ayaa MOU ku saxeexay Nairobi. Nuxurka MOU waxa uu ahaa in labada dal ka wada hadlaan, Qaramada madoobina arinkan wax ku yeelato. Xuduudna la sameeyo marka labada dal go’aan ka gaadhaan arimahan.
Yaman ayaa iyana isku dayday in ay tidhaa Somaaliya baddeeda anakaa u xadaynayna. August 2009, CCC ayaa fariin u diray Qaramada midoobay isaga oo gaashaanka ku dhuftay sheegashada ay shaaganayso Yaman badda Soomaaliya.
10 October 2009 – RW Cumar Cabdirashiid wuxuu warqad u diray Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay. Wuxuuna ogeysiiyay go’aanka diidmada baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu ku caddeeyey warqada in MOU-ga aan la isticmaali Karin.35
10 March 2010 – Warqadda Cumar Cabdirashiid ee Go’aanka Baarlamaanka gudbinaysa waxaa ay Qaramada Midoobay gaartay 10 March 2010. Muddo dheer ayay ku qaadatay Soomaaliya in go’aanka baarlamaanka la gaarsiiyo Qaramada Midoobay (OPM/IC/00/016/1109). Qaramada Midoobay waxay MOU-ga u aqoonsadeen inaan la tixraaci Karin.36
15 March to 23 April 2010- Kulankii 25aad ee CLCS oo lagu eegayay xogta Kenya, waxay Guddigu qireen helitaanka warqadii Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid ee taariikhdeedu ahayd 10 Oktoobar 2009 ee Baarlamaanku ku diideen MOUda.42. 9 January
2014 – Kenya waxay u dirtay QM warqad iyo khariidad caddaynaya xuduuda badda ee ay la leedahay Soomaaliya.
Kadib markay Kenya isku dayday in ay jabiso heshiiskii MOU oo ahaa in lagawada heshiiyo, July 13,, 2015, Soomaaliya waxay maxkamadda caalamiga gaysay dacwadeeda. Kenya waxa jawaabta dacwaddeeda laga gudbisay 27 May 2016.
Shariif Xassan, Cumar Cabdi Rashiid, C/Raxamaan Cabdi Shakuur iyo C/raxmaan Ibi mid koodna Baddena ma gadan. XSM waxa uu dacweeyey Kenya markii ay kenya istidhii Soomaaliya ka faaiidayso.. Arinta waa in aan meel uga soo wada jeedsanaa, mudici, muxaafid iyo wadaadba. This is time for Call of the mother land.!
70Mohamed Aden Ali, Seefdhere Afdhurde and 68 others
Abdalla Mahdi Bashiir Timacade Mudane Faisal Roble Mahadsanid Waxaan aad u jecelaystay gunaanadkaaga Mudane in eedeen aan sal iyo raad laheyn isku eedeyno waa Waxaan dalkeena ku duminey ee hal meel halaga soo wadajeedsado hana la joojiyo wararka kuturi ku teenta ah
Abdi Aziz Bandirad Mahadsanid si quta dheer ayaad u faaleysay, run ahaantii fahamka qadiyatani uma baahna laab la kac iyo fara fara ku taag, in la fahmo lafteeda ayaa dulqaad iyo cilmi baaria badan u baahan. Waxaadse moodaa in dacwadda baddu abuuri doonto xulafaysi siyaa…See more
Faisal Roble replied · 1 Reply
Abdikarim Mohamed Qofweyn lama dhihikaro beentaa lkn badeena marna ma soo marin qilaaf Kenya waligeed bad naguma qabsan ee qiilraadiska iska daa ccc iyo shariif midna weesada umadhoorna shaqsi ahaantayda ma taageersani Xasan lkn hore udhahday gaalka dil gartisana sii ee Xasan arintani dhibco kisii
Mohamed Ahmed replied · 5 Replies
Aw Barkhadle Runtii waa qormo iftiimin aan innaba caadi ahayn saaraysa sheekada buuqeedu uu waayadan ba hareeyay dadkeenna.
Ku mahadsanid Faysal Rooble, wadaajintaada. Mohamud Mire KuuriyaAhmed A. Qoofalle Osman Ali Adde Abdi J Arab Abdiweli Waberi
Osman Ali Adde replied · 2 Replies
Abdirahman Sed Faisal Roble aad baad ugu Mahadsan tahay sida qotoda dheer ee aad u faahfaahisay, Umadana Qaar xukun riday oo aan Qoraalkaagu anfacayn baa jiree ogoow.
Abdifatah Ahmed Mohamud replied · 2 Replies · 9 hrs
Abdirizak Hagi Faisal Roble, qudbadii Kiinya waxaa ka mid ahaa:
“Calaamadeynta soohdinta badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya in ay tahay mid u baahan wada xaajood xasaasi ah oo laba-geesood ah. Wadahadalkaasi ma ahan in uu eego keliya QAANUUN uun ee waa in uu…See more
Faisal Roble Runtii marka aad documaantooyinka akhrido, meel kaliya ayaa arintan looga soo wada jeedsaday ee aan qaramaeyno waa arin qaran.
Abdirizak Hagi Faisal Roble,
Waxaan xasuustaa bilowgii sanadkan assignment la iiga baahnaa in aan diyaariyo ee coursega ICJ ee kuliyada Sharciga, ayaan kula soo xiriiray kaana codsaday in aad macluumaad ii soo dirtid, adiga iyo Aqoonyahanno soomaaliyeed kale, …See more
Faisal Roble replied · 3 Replies
Niman Mohamud After watching the ICJ discussions on the 2009 MOU, I came out with same conclusions. Maybe Somali leaders didn’t have the capacity, expertise, and did not discharge their fidicary responsibilities but one is clear to me, they did not sell our waters. …See more
Said Xaaji Ismail Mahadsanid Hon Faisal Roble
Said Hirsi Thanks Faisal, dadku waxey u baahan yihiin in wax la fahamsiiyo, sidaa aad u sheegeyso baan maalin ka hor dad dhowr ah u sheegayey, teydu in yar bey gaareysay, laakiin taadu meel fog bey gaareysaa mar hadaad Facebook wall-kaaga ku soo qodhay.
Thanks though mar 2aad
Suleiman Mohamed Ibrahim Waa in wax la baaraa oo la hubiyaa inta qofku uusan qorin warbixin iyo dhaleeceeyn sida badanaa dhacda!. Gebogebadii aad ayaad ugu mahadsan tahay soo gudbinta xogtaan Kooban oo taariikh iyo xigasho la socoto.
Abdinor M Salad Thanks Thanks Faisal Roble muwaadin dhab ah aya tahay
Mohamed Abdikarim I agree , shaley sheekadeeda waxaa dhaanta maantoo aan difaacano si wadajir ah.
Abdifatah Mohamed Musse Thanks Faisal Roble waa xog aad u muhiim ah iftiiminaysana qodobo badan oo tix raac u baahnayd. Waxaan filayaa in wax kastoo dhacayba Norway lafteedu ay aahyd quwadda kaliya ee arrintan miiska keentay ayna tahay qawleysato doonaysey inay boobaan khayraadka dabiiciga ah ee umadda Somaliyed.
Sakariye Maxamed Isticmaar Waa Qormo Mugdiga ka saareysa Shacabka la Jahwareeriyay ee loo Adeegsaday Arrimaha Doorashada.
Sayid Mohamed Markii hore ma aheyn dowladii Sheikh Sharif iney furto wada hadal ku sabsan xaduudaha Somalia iyagoo wali ku meel gaar ah.
Faisal Roble Sayid, canaanta ugu weyni waa taasi, iyana bad iibsi kama ahyn waa karti I iyo aqoon daro madoobina badadan aan ku crlceliyay. Weak government and 4.5 leadership ayaa Keena dad aan inaba diyaar u ahynyn maaraynta arimaha cakiran ee Ina haysta. Laakiin waa in aan runta ka sheegaa si aynu runta u gaadho. Mahadsanid.
Mustaf Bashir Gobdon Wixii Aqoonyahan laga filayay Maantaad Muujisay Ka Xarow Meel Hoose Hankaagu ka yeel In Soomali wax la wadaagto Thanks Jimco wanaagsan
Abdifatah Mohamed Musse Haddiiba ay saxeexeen MOU ga, inay qodob ahaan dhankooda uugu darsadaan bay ahayd in uu kuxidhanyahay Baarlamaanka ansixintiisa.
Ahmed Yassin Hussen Waxaa isweediin iyo dhabo gal u baahan sababta ay doowladda Soomaaliya xilligii kala guurku ahaa ay ugu ogolaatey in Doowladda Norway ay ka qaataan qandaraas isla markaana Mareeykan ku aad ula fajacey oo la igu isugu tuur tuurey, Farmaajo iyo Ina Cabdirashid dusha looga tuuray?!!!
King Yusuf Moha Abti Faisal Roble artikel waa mid xaqiiqda runta ah ka diyaarisay waan kugu raacsanahay 100% god bless you
Idriss M. Sh Hamud Mudane Faisal Roble Aad baad ugu mahadanatahay xogta aad nala wadaagtay .
Marka labaad Faisal ma ogolyihiin ragan la tuhmay in baaritaan ay ku sameeyaan hayadaha Qaranku. ? Siiba PM Omar oo asaga shaqsiyan dano badan ay uga xirnaayeen Kenya siiba x…See more
Ahmed M. Yassin Qoraal aad u qiimo badan, aqoon iyo taariikh-na xambaarsan tahay.Thanks Feysal Rooble.
Faiza Ali Ali Thanks feysal Rooble I wish Somaliya qof kartidaas ayey u bahan tahay good to explain Mashallah
Mohamoud Ibrahim Dhibku waxa weeye, arrinta baaxaddeeda, damaca Kenya, degganaansha laaanta Soomaaliya’ ku degdegidda Soomaaliya ee saxeexidda MOU, metelaadla’aanta Madaxda Soomaaliya (question of legitimacy) kalsooni darrada ummadda Soomaaliyeed soo kala dhexgashay (…See more
Viagra Plus without prescription, purchase Zoloft.
Cabdixakim Alibare Mudane waa qaraal mugwey xaqiiqna ku saleysan.Thanks
Mohamed Abdi Md. Faisal waad mahadsantahay – dalkaaga yaad wax u baratay waanad u shaqaysay – waa waajib kusaaran difaaciisa dhinac walba
online sildenafil, lioresal reviews.
Taahir Ali Abtidoon Mahadsanid Faisal Roble Wa Qoraal Reference leh Balse Su.aasha? Waxa ay Tahay Maxaa U Diiday Sedex Masuul Sh.Sh CCC Abdishakur Ee Somalidu Tuhmeen Inay Sidaan oo Kale Shacabka Wax U Faham siiyaan ama ugu Cadeyaan Oo Tuhunka Ama Eeda Iska Fogeyaan. iLeyn Somalidu Waxay Tiraa iLaaqo Qoray Dheer ayaa Lays Kaaga Tiraa.
Taahir Ali Abtidoon replied · 2 Replies · 4 hrs
Ayaan Omar Altezo Mahadsanid Faisal Roble ✌ 👍
Commissioner Said Hashi Warsame Waxaan ku raacsanahay Faysal qadiyadda aan qaramayno
Abdifatah Ahmed Mohamud Faisal Roble waad mahadsantay sidaad u qeexday siday wax u dheceen qaladkuna wuxu ahaa dawladii shiikh shariif ba ku degdegtay in wada hadal la samayso kenya waayo dawalada somaliya waa tabaraysan waa daalaa dhac ilaa iminka muran bay ina gesheen ragaanu ee wax ma gadan hadana inagoo ul iyo diirkeed baynu mintidayna gacmahana is qobsanaynaa insha allah
Abdurahman Hirad Mahadsanid Faisal Roble
Baidan Cigale Faisal Roble walaal illaahay baa mahad oo dhan iskaleh illaahi somali kaa dhigay ee hadana Aqoonyahan Sharaf iyo karaamo leh ee akhlaaqda iyo ixtiraamka bani adamka iyo jacaylka wadaninimada leh ayaad tahaye illaahay ha kaa dhigo kii somali hogaamin lahaa inkasto la helaayo kuwo cudur qabil qaba oo wax kaa sheegi doona we proud of you faisal ibnu Roble
Cabdi Sagal Somalidu waxey ku maahmaahdaa “hubsiinyo hal baa la siistaa”, Somali hadaan nahay waxaa jecelnahay in si laablakac ah arimaha u waa jahno.waxaa inoo dhib yar in aan eedayn ama daleecayno inagoon xaqiiqaata wali taaban, lknse waxaan ku faraxsanahy in ay…See more
Jamal Hassan xaqiiqada Alle ayaa garanaya waxaadse moodaa in sidaFaisal Roble uu u dhigay ay ugu dhawdahay marka laga saaro arrintan abaarteeda caadifada iyo siyaasadeenta.
Ali Farah F.Roble dadaal loo baahnaa buu sameeyey, waana ku mahadsanyahay xogta uu soo ururiyey
Idil Kenadiid Nin raga waa kan xaqa iyo baadilka kala saara waa inuu qofku runta ka sheegaa haduu xataa qofkuu ka hadlyo neceb yahy ama mucaaradsan yahy. Inkastoo eynaan dhaqankaas lahyn odygii awoowe ahaa waa ku banaanthy adeero Faisal Roble
Bashir Issa Diriye Faisal Rooble waa sidaa aad u tiri saaxiib
Yusuf Said Hersi Mahadsanid sida qotada dheer oo aad tafatirtay arimihii badeena barya hore iyo baryahanba ka taagnaa iyo dadka masuulka ah oo eeda loo saaray. Lakiin mid ayaa iiga muuqata in uu XSM uga faa’ideystay arintan badda waqtiga uu ku beegay maxkamada waqtiga doorashada dalka si uu igu canbaareyo musharixiinta la baratameyso.
Faisal Roble Ka yeeli mayno. Arintan weynu owada simanahay. Eray kasta uu ka yidhaa waa in aan u fiirsanaa. Guushana waa lawada leeyahay.
Abdul Rehman Gablax Faysal waa ku mahadsantahay war bixintaan qaaliga ah. Intii arrinkaan laga hadlayey ma jirin cid sidaas u waadixisay.
Warbixintaani waxay noo sheegaysaa in hoggaamiyayaasha Somalidu runtii waddankooda jecelyihiin una dagaallamayaan badbaadada dalka in…See more
Hassan Dual Aqoonyahan Faisal Abdi Roble, waxaad ka saartay arrinta Badda Somalida Mugdigii ku jiray, waxaad nal weyn ku shiday sooyaalka Taariikhda muranka Badda ee Kenya iyo Somaliya. Arrinta Baddu waxay mideysay shucuurta Qoomiyada Soomaaliyeed meel ay joogtaba qoraalkaagani waa mid dhaxal-gal ah.
Mohamed Abdurahman Waxaan akhriyey maqaal u qoray garyaqaan Mohamed Isse Turunji oo ahaa qaali iyo garyaqaan Soomaaliya uga qaybgali jirey Xeerka Badda. Garyaqaankaasi wuxuu leeyahay MOU ma ha in badda la gatay. Garyaqaanku qoraalkiisu waa dheer yahay, waxaan ka soo qaa…See more